Miala amin'ny asa lehibe aho ary mitondra lohateny ho an'ny haino aman-jery sosialy | Martech Zone
Ny taona lasa niarahako Patronpath dia nitaingina roller coaster tsy mampino. Ny orinasa dia ao anaty fitomboan'ny fitomboana ary mahomby tokoa!
Nandresy ny Mari-pankasitrahana Techpoint Mira.
Nahavita ny fampandrosoana ny 4 izahay pos fampidirana - Mikraoba, POSitouch, Comtrex ary Aloha.
Nanamboatra ny interface ny mpampiasa izahay mba hampitomboana ny fiovam-po ho an'ny mpanjifanay. Nanampy fihenam-bidy sy fiarovana izahay amin'ny fampiharana.
Nanipy tranokala misy ny Toeram-pisakafoanana mihitsy aza izahay ho an'ireo gadra maromaro.
Ny zoma no androko farany tao Patronpath. Sarotra ny nandao orinasa iray izay nandatsahako ny foko sy ny fanahiko ary manana ny famatsiam-bola ny sasany amin'ny ankamaroany mahomby Internet orinasa in Indianapolis.
Miala amin'ny Patronpath
Tsy manana ahiahy aho hoe navelako tamin'ny endrika tsara ny orinasa. Ny hany ahiako dia hoe mety ve ireo mpampiasa vola na tsia amin'ilay hetsika. Antony iray lehibe nahatongavako tany Patronpath ny hahafantarana ny ekipam-bolan'izy ireo - misy ny mpandraharaha Internet tsara indrindra any amin'ny faritra. Ny zavatra farany tiako hatao dia ny nandao azy ireo taorian'ny fahombiazana be dia be. Hanohy hanome torohevitra sy fanampiana an'i Patronpath aho isaky ny mila ahy izy ireo, hiantohana ny fialako tsy hisy fiantraikany amin'ny fahombiazan'izy ireo.
Ny fitomboana sy ny valiny dia azo antoka fa nisongadina tao Patronpath. Afaka nanararaotra niara-niasa tamina olona tsy mampino aho. Niasa tamin'ny fahagagana vitsivitsy izahay tamin'ny taon-dasa ary tsy nanana loharanom-bola firy. Reharehako ny zava-bitantsika.
Miara-miasa amin'ny olona manerantany
Nandritra izay 6 volana lasa izay, nahafinaritra ahy ny niara-niasa tamin'i Marty Bird - olona fantatro hatramin'ny fahazazako tany ExactTarget fa tsy nanana fotoana hiasana mivantana mihitsy. Marty dia mpivarotra tsy manam-paharoa manana fahaiza-manao amin'ny fananganana programa varotra kilasy eran-tany hatramin'ny voalohany.
Nankany Patronpath i Marty mba handray programa mailaka vao manomboka vao nosoniavinay ho an'ny orinasa amina miliara dolara. Tao anatin'ny 2 andro dia noraisiny ilay tetikasa. Tao anatin'ny tapa-bolana dia nanangana programa sy fandaminana manodidina ilay tetikasa izy. Ankehitriny ny programa dia mitohy mitombo sy mamony eo ambany fitarihany. Tena bandy mahafinaritra ô! Zava-misy tsy fantatra, marty koa dia mekanika mavesatra a firehetam-po amin'ny Audi TT.
Ny sisa amin'ny ekipa dia tsara koa. Mark Gallo sy Chad Hankinson dia nahafinaritra ny niara-niasa tamina matihanina sy manokana. Samy Kristiana lehibe izy ireo izay nanampy nanoro hevitra ahy tamin'ny alàlan'ny fanamby sasany. Manana trosa aho roa. Izy ireo koa dia manana ekipa fitantanana kaonty izay mpiady mavitrika amin'ny fanampiana ny mpanjifany hahomby. Afaka niara-niasa tamin'i Tammy Heath aho nandritra ny taona maro ary nahagaga izy, nanondrana mpanjifa am-polony isan'ora ary mbola afaka mamokatra.
Amin'ny lafiny sarotra amin'ity taona ity dia ny fitakian'ny asa sy ny fomba nanintona ny saiko manontolo. Nijaly ity bilaogy ity toa ny fiheverana azoko omena ny sasany PET tetikasa. Ny fiantsoana dia nanalavitra ahy tamin'ny hetsika tambajotram-paritra. Ireo fotoana tsy fahita firy nisehoako dia taitra ny olona!
Ny fiara avy any amin'ny ilany avaratr'i Indy dia zavatra tiako indrindra tamin'ny voalohany, saingy rehefa nisondrotra ny vidin'ny lasantsy ary nila ahy nody bebe kokoa ny zanako vavy dia nanomboka naratra tokoa ny adiny roa isan'andro. Feno fankasitrahana aho noho izany ny zanako lahy - eo am-pelatanana entana feno amin'ny IUPUI ary koa ny fampianarana manokana sy ao amin'ny Ivotoerana Fanampiana Matematika, dia mbola nahita fotoana hitondrana an'i Katie amin'ireo hetsika sy hanomezana sakafo azy. Misaotra an'ireo zanako tsy mampino aho!
Lohateny mankany amin'ny Blogging Compendium
Ka… rehefa niantso an'i Chris Baggott Compendium Blogware ary nilaza fa mety hisy fotoana hiaraha-miasa amin'izy ireo, faly aho! famintinana nanomboka miaraka amin'i Chris sy izaho miasa amin'ny faran'ny herinandro tamin'ny 2006.
Nijanona tao amin'ny ExactTarget aho ary tonga tao an-tsambo i Ali Sales. Ny fitarihan'i Ali miaraka amin'ny fitiavan'i Chris dia nanondrotra ilay orinasa ho lasa mampino Sehatra fitorahana bilaogy orinasa. Izaho dia nitazona fifandraisana akaiky tamin'ny orinasa nandritra ny taona lasa ary nitory ny filazantsara tamin'ilay sehatra. Vao avy nitondra ny orinasan-dalàna Bose McKinney iray volana lasa izay izahay ary efa nilaza izy ireo fa mitatitra fitarihana Search Engine lehibe sahady!
Amin'ny Alatsinainy, miantsoroka andraikitra amin'ny Filoha lefitry ny Evanjelisitra fitorahana blaogy ao amin'ny Compendium. Hitory amin'i Ali aho ary hanampy ny ekipanay sy ny mpanjifanay rehetra hampianatra, hitory filazantsara, hanamory, hampiditra, sns. Ny asako dia ny manampy amin'ny fampivoarana haingana ny mpanjifa ary manampy azy ireo hitrandraka tanteraka ny sehatra hanamafisana ny vokany mandritra ny ezaky ny marketing. Izany dia toerana sarotra hialana amin'ny asako ny taona vitsy lasa. Izaho koa dia hiasa eny amin'ny Circle any Indy indray, ka azoko antoka fa hifanena amin'ireo mpiara-miasa taloha be aho!
Raha eritreretina dia nanomboka tamin'i Pat Coyle sy mamaky aho Resadresaka mitanjaka taona vitsivitsy lasa izay dia mahatalanjona tokoa.
Miaraka amin'izany, misaotra anao aho Robert Scoble ary Shel Israely noho ny fanoratana boky nanentana ny fanahiko hanomboka ny bilaogiko manokana ary nanova ny làlana tiako haleha amin'ny tontolon'ny varotra! Ny fahazoako toerana eo amin'ny haino aman-jery sosialy mandritra ny iray amin'ireo fitotonganana ara-toekarena ratsy indrindra teo amin'ny tantaran'ny firenena dia milaza ny herin'ity haino aman-jery ity, sa tsy izany?
Lahatsoratra 1,500! Mandrosoa amin'ny fanapahana media sosialy!
4 Okt 2008 amin'ny 5:10 PM
Arahabaina Doug! Miandrandra ny fandrenesana rehetra momba ny asa vaovao!
Ny tsara indrindra avy any ampitan'ny dobo,
4 Okt 2008 amin'ny 5:13 PM
Vaovao mahafaly izany Andriamatoa VP, tompoko, Andriamatoa!
Tsy mety ho nitranga tamin'ny lehilahy tsara tarehy kokoa!
4 Okt 2008 amin'ny 5:31 PM
Vaovao mahafaly, Doug! Nahafinaritra ny namaky ny antsipiriany sy ny tantara tao ambadiky ny fanapahan-kevitrao.
4 Okt 2008 amin'ny 5:33 PM
Arahabaina ry Doug. Vaovao mahafaly ary misaotra nizara ny tantaranao.
4 Okt 2008 amin'ny 5:49 PM
Tongasoa eto amin'ny media sosialy! Ralehilahy, tiako koa!! Mihinana sy miaina ary matory ity zavatra ity aho !! Ny tsara indrindra ho anao!!
4 Okt 2008 amin'ny 6:08 PM
Ampahafantaro anay ny fahombiazanao! Faly aho mahita izay ho entinao any amin'ny orinasa efa mahagaga!
4 Okt 2008 amin'ny 6:23 PM
Doug - oay! misaotra anao amin'ny teny mahafinaritra. Ny talentanao, ny fitiavanao ary ny hafanam-ponao dia hanampy anao amin'ny Compendium - arahabaina. Ny fandraisanao anjara lehibe amin'ny Patronpath dia namorona fototra izay hotohizanay. Malahelo ny fanatrehanao any amin'ny birao aho, ny fihetsikao manetry tena, ny tsironao adala amin'ny mozika ( ! ) ary ny fihomehezanao. Ny fanarahana anao ao amin'ny Twitter dia tsy hisolo ireo resadresaka mahafinaritra momba ny ora antoandro nataontsika! Mitandrema Doug.
5 Oktobra 2008 à 1:07
WOW!! Mahafinaritra izany! Fantatro fa hahavita tsara ianao– izany no fitiavanao!
5 Oktobra 2008 à 7:26
Tsaroako ianao nilaza tamiko ny fandraisanao anjara amin'ny Compendium ary nihevitra aho fa mety ho sehatra lehibe ho anao izany!
Mahafinaritra ny mandre fa tonga ny farany!
5 Oktobra 2008 à 9:58
Mirary soa Doug!
Toa mety tsara aminao. Nahafinaritra ahy ny asa ataonao amin'ny fotoana malalaka eto amin'ity bilaogy ity. Hahafinaritra ny mahita hoe manao ahoana izany rehefa misy ny sainao rehetra.
5 Okt 2008 amin'ny 6:13 PM
Arahabaina ry Doug!
Hanao tsara ianao amin'ny Compendium!
6 Oktobra 2008 à 12:28
Mirary soa ho anao Doug. Azoko antoka fa hahafinaritra anao ilay gig vaovao ary tiako ilay lohateny vaovao! (Misintona izay efa nataonao izany.)
6 Oktobra 2008 à 5:08
7 Okt 2008 amin'ny 2:59 PM
Arahabaina i Doug, vao nahita ny vaovao androany! Mirary soa amin'ny anjara asanao vaovao, toa mifanentana tsara ianao sy ny Compendium.
May 30, 2011 amin'ny 8: 15 AM
WOW!! Mahafinaritra izany! Hahomby ianao amin'ny Compendium!